तपाईको जिउमा भएको मुसा क्यान्सरको कारण पनि बन्न सक्छ - स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
तपाईको जिउमा भएको मुसा क्यान्सरको कारण पनि बन्न सक्छ
असार २८, २०७४ डा. लालित कुमार मिश्र
काठमाडौं — मुसा यदी गर्धनको पछाडी छ या शरीरको झट्ट सबैको नजर नपर्ने ठाउँमा छ भने कुनै चिन्ताको बिषय हुँदैन । तर, कहिले काही मुसा अनुहारमा यस्तो ठाउँमा आईदिन्छ, जहाँ सबैको नजर सोझै पर्दछ । जस्तै- गाला, आँखीभौं, आखाँको परेली, नाकको टुप्पो, निधार आदिमा । अनुहारमा मुसा हेर्दा राम्रो देखिंदैन ।
किन हुन्छ मुसा ?
जन्मिए पछि देखापर्ने मुसाको मुख्य कारण ईन्फेक्सन हो । यि मुसाहरु शरीरमा आउनुको कारण एक प्रकारको ह्युमन पेपिलोमा नामक भाईरस हो । छालामा पेपिलोमा भाइरसको कारण सा-साना, खस्रो, कडा खालको दर्दरहित दाना जस्तो छालामा पलाउद छ । केहि प्रकारका मुसाहरु शारीरिक सम्पर्क को माध्यमले पनि फेलिन्छ । मुसा तोरी को दाना देखि अंगूरको को आकार जत्रो पनि हुनसक्छ । मुसा शरीरको एक ठाउँ बाट अर्को ठाउँमा सर्दै जान्छ । यो एक किसिम को छालाको रोग हो । जसलाई मुसा( वार्टस) भनिन्छ । सामन्यतया शरीरमा देखिने मुसाहरु कालो, खैरो , सेतो, रातो किसिम को देखिन्छ भने कहिले काहि छालाको रगं जस्तो पनि हुन्छ । जसले गर्दा मानिसहरु लाइ यि मुसाहरु आएको थाहा नै हुदैन । यसकारण मानिसहरु यसको बारेमा ध्यान दिदैनन ।
लक्षणहरु : धेरै जसो मुसाहरु छालाको सतह भन्दा आलिक माथि उठेको खस्रो सतह भएको हुन्छ । आकारमा यो गोलो, अण्डाकार, च्याप्टो हुन्छ भने केहि चिल्लो मुलायम र च्येप्टो सतह भएको हुन्छ । कुनै मुसा पेन्डुलम किसिमको हुन्छ यताउति हल्लिने खालको पनि हुन्छ । केहि मुसा भने छुँदा दुख्ने खालको पनि हुन्छ । कुनै अजेरु पलाएको जस्तै हुन्छ । पानीले धुँदा वा नुहाउँदा ढाडिएर फुलेर आउँछ । हेर्दा घिन लाग्दो देखिन्छ, यस्ता मुसाहरु बिषेश गरी हात र खुट्टामा देखिन्छन् ।
मुसामा प्रकारहरु : (१) साधारण देखिने मुसाहरुलाई कमन वार्टस भनिन्छ । यस्ता मुसा हात, खुट्टा, मुख वा कपडाले नढाकिने शरीरका विभिन्न स्थानहरुमा बढी देखिन्छ । यि मुसा साना/ठुला पनि हुनसक्छ । यो मुसा हेर्दा खस्रो देखिने, सारो र पानी पर्दा फुल्ने खालको हुन्छ । बच्चा र बुढा सबैलाई यस प्रकारको मुसा आउँछ । (२) च्येप्टो खालको मुसा (फ्ल्याट वार्टस) बच्चा र बयस्क व्यक्तिमा बढी देखिन्छ । बिषेश गरेर केटा-केटीहरुको अनुहार, निधार, हात र खुट्टामा यो देखिन्छ । यो अन्य मुसा जस्तो सजिलै थाहा पाउन सकिन्न । यस्ता मुसा सा-साना थोप्ला जस्ता देखिन्छन् र यसको टुप्पो पनि समथर हुन्छ । यो दाह्री जुँगा भएको ठाउँमा बढी आउँछ । यस प्रकारको मुसा बच्चाको हातमा पनि देखिन्छ । (३) जेनिटल वार्टस (कन्डिलोमा) अर्थात प्राईभेट पार्टसमा देखिने यो मुसा सामान्यतया गुप्तांग क्षेत्र वरिपरि र तिघ्राको बीचमा तथा महिलाको योनीका साथै मलद्वारमा पनि देखिन्छ । यि मुसा यौन सम्पर्कबाट सर्दछ । यि मुसाहरु आकारमा अंगुरका झुप्पा जस्ता स-साना दाना देखि ठुला-ठुला झुप्पा जस्ता पनि हुनसक्छन् । (४) हत्केला र खुट्टामा देखिने मुसालाई प्लामो प्लान्टर वार्टस भनिन्छ । हत्केला र खुट्टाको पैतालामा हुने यस प्रकारका मुसाहरु दुख्ने र सारो हुनुको साथै बीच भागमा केहि खाल्डो युक्त हुन्छ । यसले गर्दा ब्यक्तिलाई हिड्डुल गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ । नङको जरा वा वरिपरि यस्तो मुसा आउँदा अत्यन्तै दुख्छ । (५) यस्तै अर्को प्रकारको मुसा जुन प्राय (बुचर ) कसाई (मासु काटी रहने मान्छे) को हातमा देखिन्छ । यस प्रकारको मुसालाई बुचर वार्टस भनिन्छ । यो साह्रै कडा हुन्छ र हेर्दा काउली जस्तो देखिन्छ ।
क्यान्सर कारक पनि हुन्छ मुसा : यदी तपाईलाई जन्मिदा देखिने कुनै मुसा छ भने यो हानिकारक हुँदैन । तर, मुसा जन्मेपछि या ठुलो भएपछि देखिएको हो भने समय बित्दै जाँदा यसले क्यान्सरको रुप धारण पनि गर्न सक्छ । यदी कुनै ब्यक्तिमा तीस बर्षको उमेर पछि मुसा पलाएको छ भने त्यसमा क्यान्सर हुने खतरा बढि रहन्छ ।
खतरानाक अवस्थाका मुसा : यदी शरीरमा भएको कुनै मुसाबाट रगत आएमा, यसलाई नजर अन्दाज गर्नु हुँदैन । यदी मुसा भएको ठाउँ चिलाउँछ भने पनि यसलाई हलुका ढंगले लिनु हुँदैन । तुरुन्तै चिकित्सकसंग सल्लाह गर्नु पर्छ ।
उपचार : हुन त मुसा ६ महिनादेखि बर्ष दिन भित्र आफै हराएर जान थाल्छ । त्यसको लागि कुनै विषेश उपचार गरिरहनु पर्दैन । शरीरका बिभिन्न भागमा रहेका मुसाहरुको उपचार विभिन्न प्रकारको बिधिबाट गरिन्छ । जस्तै- भौतिक रुपले नष्ट गर्ने । करेन्टले डामेर वा लेजर प्रबिधिबाट मुसालाई हटाउने आदि इत्यादी । यि बिधिका आफ्नै जटिलता र धेरै साईड ईफेक्टहरु पनि छन् ।
होमियोप्याथिक औषधि : रोगीको मानसिक एवं शारीरिक लक्षणको साथै मुसा शरीरको कुन अगंमा छ, त्यसको आकार, प्रकार, रंग, साईज ईत्यादी ध्यानमा राखेर रोगीको उपचार गरिन्छ । मुसाको उपचारको लागि प्रयोग गरिने केहि औषधिहरु निम्न लिखित छन् :
खैरो( ब्राउन) किसिमको मुसाको लागि – थुजा ।
सुख्खा किसिमको मुसा भएमा - स्टेफिसिग्रिया ।
फ्ल्याट (चेप्टो) प्रकारको मुसामा – डल्कामारा ।
झुन्डिएको (पेन्डुलम) मुसाको लागि –एसिड नाईट्रिक ।
पिपयुक्त मुसाका लागि – हिपर सल्फर ।
औलाको पछाडिको मुसाका लागि - डल्कामारा, थुजा ।
मुसा खस्रो, कडा र तिखो चुच्चो निस्केको मुसाका लागि – कस्टिकम ।
हातकेलामा देखिएको मुसाका लागि – नेट्रम–म्युर, रुटा, नेट्रम–कार्व, एनाकर्डियम ।
कम्मर पछाडीको भागमा मुसा भएमा – डल्कामारा ।
पैतालामा भएको मुसाको लागि – एन्टीम क्रुड । आदी ।
सल्लाह : केहि ब्यक्तिहरु मुसालाई हटाउन त्यसलाई काट्न लगाउँछन् वा घरमा आफैले काट्ने गर्छन् । कसैले चुन र सोडाको मिश्रणको लेदो बनाएर लगाउँने गर्छन् । तर, यसो गर्नु हुँदैन । मुसालाई डाम्ने, काटने या फुटाउने गर्नाले मुसाको भाइरस शरीरको अन्य भागमा पनि जाने खतरा हुन्छ । जसले गर्दा अझ बढि मात्रामा शरीरको बिभिन्न भागहरुमा मुसा पलाएर आउँछ।
प्रकाशित : असार २८, २०७४ १८:५१
तपाईलाई पसिना धेरै आउँछ ? यस्ता छन्, रोकथामका उपाय
असार ७, २०७४ डा. लालित कुमार मिश्र
काठमाडौं — शरीरबाट पसिना निस्किनु एक स्वभाविक प्रकृया हो । यसले शरीरको तापक्रमलाई सन्तुलनमा राख्दछ र स्वच्छ वायु शरीरमा पुर्याउछ । पसिनाको माध्यमले शरीरभित्र भएको बिकार बाहिरआउछ । शरीरबाट पसिना निस्केन वा कुनै कारणबस पसिना भित्रै रोकिन गयोभने धेरै प्रकारका शारीरिक रोगहरु उत्पन्न हुन सक्छन् ।
अतः शरीरलाई स्वस्थ्य राख्नको लागि पनि शरीरबाट पसिना निस्किनु अत्यन्त आवश्यक छ । यसैले मानिस अचेल पसिना आउने गरी साईकिलिङ, ब्यायाम, जगिङ, मोर्निड.वाक या जीममा गएर पसिना निकाल्ने गर्दछन् । तर, कहिलेकाहि आवश्यकता भन्दा बढि मात्रामा तथा बिना कारणबस शरीरबाट पसिना आउन थाल्छ । बढि पसिना आउनलाई चिकित्साविज्ञानमा हाईपरहाईड्रोसिस अर्थात अत्यधिक पसिनाआउनु भनिन्छ । एक तथ्याङ अनुसार विश्वको कुल जनसंख्याको करिव दुई प्रतिशत मानिसमा हाईपरहाईड्रोसिस भएकोअनुमान गरिएकोछ । सामान्यतया महिलाहरुको तुलनामा पुरुषहरुलाई धैरै मात्रामा पसिना आउने गर्दछ ।
पसिना के हो ?
छालाको भित्रिसतहमा अवस्थित श्वेदग्रन्थि (Sweat Glands)बाट पसिना बन्दछ । यो ग्रन्थिको काम भने शरीरको तापक्रमलाई नियन्त्रणमा राख्नु हो । अत्याधिक गर्मिका कारण छालालाई डढ्नबाट जोगाउनको लागि श्वेदग्रन्थिले छालाको माथिल्लो सतहमा नुनयुक्त पानी (पसिना) उत्पादन गर्दछ। जसलाई पसिना भनिएको हो । शरीरबाट निस्केको पसिनाको स्वाद प्रायः नुनिलो हुन्छ ।
पसिना कसरी आउछ ?
शरीरमा पसिना आउनका बिभिन्न कारणहरु छन् । वंशानुगत कारणले पनि बढि पसिना आउने हुन्छ । गर्मीमा धेरै शारीरिक श्रम गर्नु, खेलकुदको अभ्यास वा ब्यायाम बढि गर्नु, तेलयुक्त मसालादार खाना बराबर खानु, कब्जियत हुनले पनि पसिना बढिआउछ । यसबाहेक कुनै शारीरिक रोग भएमा जस्तै : मलेरिया, टाईफाईड, डेंगु ज्वरो, छातीको टी.वी. रगत दुषित हुनु, एनिमिया, मानसिक तनाव, चिन्ता, घबराहट, डर, भय, आघात र कडा ज्वरोको कारणले पनि बढि पसिना आउछ । अन्य कारणहरुमा तातो पेयपदार्थ पिउनु , खैनी, गुट्खा, काँचो सुपाडी तथा नशालु पदार्थको सेवन गर्नले पनि पसिना धेरै आउछ । यस्तै शरीरिक रुपले अत्याधिक मोटो हुनु तथा शरीरको ईम्युनोसिस्टमको कारण थाइराईड ग्रन्थि बढि सक्रिय भयो भने पनि पसिना धेरै आउछ ।
शरीरमा पसिना आउने स्थानहरु
हुन त पसिना शरीरको जुनसुकै ठाँउमा पनि थोर-बहुत आउन सक्छ । तरपनि पसिना आउने खास ठाउँहरु हाम्रो शरीरमा यस प्रकार छन्: हत्केला, खुट्टाको पैताला, काँखी, काछ । यि भागहरुमा प्रायः पसिना बढि नै आउने गर्छ । यसबाहेक टाउको, निधार, माथिल्लो ओठ, पिठ्यु, पेटमा पनि पसिना आउछ । यसको कारण श्वेदग्रन्थिहरु शरीरको भित्रि भागहरु जस्तै, हत्केला र खुट्टाको पैताला तिर बढि मात्रामा हुन्छन् । ति श्वेदग्रन्थिहरु अतिसक्रिय भएपछि बढि पसिना आउछ ।
शरीरबाट निस्केको पसिना यदि वाष्पिकरण (वाफ) भएर जानसकेन भने पसिना गन्हाउन थाल्छ । शरीरको बाहिरी भागमा मृत छालाको पत्र हुन्छ, धैरे पसिना आउनाले छालाको पत्रलाई औसिलो बनाउछ । औसिलो ठाउँमा ब्याक्टेरियाहरुले हुर्किने अनुकुल बातावरण पाउने हुँदा त्यहाँ चाँडै दुर्गन्ध उत्पन्न हुन्छ । साथै व्यक्तिले लगाएको लुगामा विभिन्न प्रकारका सेतो, पहेलो, रातो, कालो, टाटेपाटे पसिनाका दागहरु बस्न थाल्छ । कतिपय व्यक्तिको पसिनामा दुर्गंन्ध पनि धैरे हुन्छ । पसिनाको गन्धका कारणसार्वजनिकस्थल, सभा-गोष्ठि र साथीभाईको माझमा बस्दा पनि लज्जित हुनुपर्नेअवस्था हुन्छ । यसैप्रकार गर्मीमा अत्याधिक पसिना निस्किने कारणले कतिपयलाई दैनिक कामकाज गर्नका लागि समेत अप्ठ्यारो हुन्छ । यसर्थ बढि पसिना आउनेले नियमित रुपमा आफ्नो शरिरको सरसफाईमा ध्यान दिएन भने यस्तामा किटाणुहरु हुर्किन पाउछन् र जिउचिलाउनुका साथै घाउखटिरा आउनेहुन्छ । बिषेशगरी पैताला, काखी, काछ र हत्केलामा बढि पसिना आउने भएकाले शरीरका यि अंगहरुको सरसफाईमा बढि ध्यान दिनुपर्छ ।
शरीरमा बढि पसिना आउन न दिनका लागि सबभन्दा राम्रो उपाय हो, शरीरलाई शितल राख्नु । यसको लागि घाम चर्किएको बेला घाममा ननिस्किने, दौडधुप र ब्यायाम कम गर्ने, शितलमा बस्ने, नियमित नुहाउने, पानी प्रशस्त मात्रामा पिउने, आफनो खानामा हरियो साग-सब्जिका साथै दही, मोही तथा सिजनअनुसारको पानीयुक्त फलफुलहरु तरबुज, खरबुज, काक्रो बढि मात्रामा खाने, नरिवल पानी पिउने, चिया, कफि, बरफको सेवन नगर्ने, राति अबेरसम्म नबस्ने, धैरे बेर भोको नरहने, बढि मसालादार (गरिष्ठभोजन) नगर्ने, खानामा लसुन, अदुबा, गोल मरिचको प्रयोग कम गर्ने र प्याजको मात्रा बढाउने गरियो भने अत्याधिक पसिना आउने क्रमलाई घटाउन सकिन्छ । केहि मानिसहरु बढि पसिना आउने डरले पानी कम पिउने गर्दछन् । यो राम्रो होईन, पानीको मात्रा शरीरमा कमभयो भने डिहाईड्रेशन हुनसक्छ । यि सबै उपायहरुलाई मनन गरी अपनाईयो भने केहि हदसम्म बढि पसिना आउने समस्यालाई घटाउन सकिन्छ । उपरोक्त बिधिबाट पनि पसिनाको मात्रा कम भएन भने चिकित्सकको सल्लाहमा औषधिको सेवन गर्नुपर्छ ।
बढि पसिना आउने समस्यालाई कम गर्न भनि एलोप्याथिकमा एल्युमिनियम क्लोराईडयुक्त-एन्टिपर्सपाईरेन्ट नामक औषधि चिकित्सकद्वारा बिरामीलाई सिफरिस गरिन्छ भने होमियोप्याथिक चिकित्सा विधिमा आवश्यकता भन्दा बढि मात्रामा तथा कुनै कारण बिना नै शरीरबाट पसिना आउछ भने रोगीलाई निकोपार्नको लागि लक्षण अनुसार प्रयोग गरिने केहि औषधिहरु निम्न लिखत छन् ।
१०) यदि निदाएको बेला मात्र पसिना आउछ र ब्युँझिएपछि हराउछ भने, कोनियम नामक औषधिको प्रयोग हितकारी हुन्छ । उ
परोक्त होमियोप्याथिक औषधिहरुको प्रयोग आफ्नो नजिकको कुनै योग्य तथा अनुभवि चिकित्सकसंग परामर्श लिई गरेमा लाभदयक हुनेछ ।
प्रकाशित : असार ७, २०७४ १४:५६